यस्तो बनेर अयो ‘समर लभ’को ट्रेलर
काठमाडौं । फिल्म ‘समर लभ’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ ।
फिल्ममा हिट हुन न्वारानदेखिको बल लगाएकी मरिष्कालाई दोहोरीले ‘लक’
काठमाडौं । मान्छेको लक पनि कस्ता–कस्ता कुरामा लेखेको हुन्छ । के चिजमा लक खोजिरहेको हुन्छ, पाउँछ अर्कैबाट । अभिनेत्री मरिष्का पोखरेललाई अहिले यस्तै भएको छ । फिल्ममा हिट हुन न्वारानदेखिको बल लगाइन् ।
राकेश राेशनलाई गलाकाे क्यान्सर
काठमाडौँ । बलिउडका चर्चित फिल्म निर्देशक एवँ अभिनेता राकेश रोशनलाई क्यान्सर देखिएको छ ।
संगीतकार दीपक भट्टराईलाई जापानमा सम्मानित
काठमाडौँ । विदेशमा बसेर पनि नेपाली गीत–संगीतको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याऊँदै आएका संगीतकार दीपक भट्टराईलाई हालै जापानमा सम्मान गरिएको छ।
पल र श्रद्धाको मुख्य भुमिकामा ‘हृदय भरी’ बन्दै
काठमाडौं । फिल्म ‘हृदय भरी’को औपचारिक घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरज सुब्बा नाल्बोको लेखन तथा निर्देशन बन्दै गरेको ‘हृदय भरी’ को औपचासरक घोषणा भएको हो ।
कादर खान र अमिताभ बच्चनको सम्बन्ध के कारणले ब्रिगिएको थियो ?
बलिउडमा चर्चित अभिनेता कादर खानको मृत्युले बलिउड शोकमा रहेको छ । तर, उनको मृत्यु पश्चात बलिउड लिजेण्ड अमिताभ बच्चनसँगको सम्बन्धलाई लिएर भने व्यापक चर्चा हुन थालेको छ ।
१० वर्षसम्म चलेको थियो बिपाशा र जोन अब्राहमको अफेयर !
एजेन्सी । बिपाशा बसु चर्चित बलिउड अभिनेत्री हुन् । बिपाशाले आज आफ्नो ३९ औं जन्मदिन मनाइरहेकी छन् । ७ जनवरी १९७९मा जन्मिएकी बिपाशाले २०१६ मा करणसिंह ग्रोवरसँग विहे गरेकी थिइन् । करणसँग बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि उनी खुसी छन् ।
बल्ल सार्वजनिक भइन् गायिका विष्णु माझी !
स्याङ्जा । आइतबार बिहान करिब ११ बजे । बा२ज २०९२ नम्बरको सेतो ट्याक्सी जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्रपेश ग¥यो । ट्याक्सीबाट सुरुमा रातो कोट र जिन्स पाइन्ट, छिरबिरे गलबन्दी र क्याप लगाएका पुरुष झरे ।
यी हुन् शाहरुख खानका २४ फ्लप फिल्म
एजेन्सी । शाहरुख खानको फिल्म लगातार फ्लप भइरहँदा पनि उनी व्यस्त बलिउड कलाकार बलिरहेका छन् । हालसालै प्रदर्शनमा आएको उनको चलचित्र ‘जिरो’ले पनि व्यवसायीक रुपमा उनलाई ‘हिरो’ बनाउन सकेन ।